भक्तपुर समाज कोरियाले नेपालमा कोरोना नियान्त्रणको लागि आर्थिक सहयोग गरे - Fonij Korea
भक्तपुर समाज कोरियाले नेपालमा कोरोना नियान्त्रणको लागि आर्थिक सहयोग गरे
लेखक: फोनिज कोरिया संवादाता | प्रकाशीत मिति: July 8, 2021
कोरोना माहामारी नियन्त्रणको लागि कोरियाबाट विभिन्न संघसंस्थाले नोपलको विभिन्न क्षेत्रमा आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन् । यसैक्रममा भक्तपुर समाज दक्षिण कोरियाद्वारा संकलित रु. १ लाख ५० हजार रकम नेपालमा भक्तपुर समाजका संस्थापक तथा पुर्वअध्यक्ष रमेश खावाजुको संयोजकत्वमा सामुहिक रुपमा भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापतिलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
सो सहयोग रकम भक्तपुरको ख्वाप अस्पतालमा निमार्ण गरिएको अक्सीजन प्लान्टमा खर्च गरिने छ । ति अक्सीजनहरु कारोना विरामीहरुलाई निशुल्क वितरण गर्दै आएका छन् । यस अक्सिजन प्लान्ट निर्माणमा सहयोग गर्ने दक्षिण कोरियामा रहेका सहयोगदाताहरुलाई समाजका अध्यक्ष रमेश गिरीले धन्यबाद दिएका छन् ।
सो हस्तान्तरण कार्यक्रममा भक्तपुर समाजका सल्लाहकार ओम सुवाल ,संस्थापक तथा पुर्वउपाध्यक्ष दिनेश राज गिरी , संस्थापक तथा पुर्वसचिब संजन जोन्छे ,मोहन श्रेष्ठ ,रोशन मैया सुवाल तथा राजु अवाल सहभागी भएका थिए ।
कोरियामा २०१३ सालमा स्थापना भएको भक्तपुर समाजले विभिन्न आर्थिक सहयोग गर्नका साथै आप्mनो कला र संस्कृतीको प्रवदर्न गर्ने कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छन् ।
काभ्रे सम्पर्क समिति दक्षिण कोरियाको छैटौं अधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा प्रकाश योञ्जन
समकालीन समाजका केही कुरा !
एनआरएन कोरियाको आठौ कार्यसमितीको नामा घोषणा तर सपथ ग्रहन बाँकी
एनआरएन कोरियाका क्षेत्रिय अध्यक्ष मदन भुजेलको आकस्मीक निधन
तमू धीं कोरियाको दोश्रो बृहत बैठक सम्पन्न ।
एनआरएन कोरियाको आठौ अधिवेशनको निर्वाचन शनिबार गरिने
काभ्रे सम्पर्क समिति दक्षिण कोरियाको छौटौ अधिवेशन अगष्ट १ मा हुने
एनआरएनए कोरियाको सचिव पदमा परी गुरुङको उम्मेदवारी ।
एनआरएन कोरियाको अन्तराष्ट्रिय महाधिवेशको प्रतिनिधी चयनको फर्म भर्ने अन्तिम मिती जुलाई २०